ကိုယ့်အိမ်က မျက်နှာကြက်ကို အလှဆင်ဖို့အတွက် စိတ်ကူး (၅) ခု
မျက်နှာကြက်ကိုကြည့်၊ ငေးမော တွေးတောတတ်သူတွေအနေနဲ့ မျက်နှာကြက်လေးကို အလှဆင်ထားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အိမ်လောက် နွေးထွေးတဲ့နေရာ ဘာများရှိဦးမှာလဲ? အိမ်ဟာ ကိုယ့်အတွက် နားခိုမှေးစက်ရာသာမက လုံခြုံနွေးထွေးမှုကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်လေးကို လှပနေအောင် ဖန်တီးထားရင် ကိုယ့်စိတ်ကလည်း ခွန်အားတွေရှိနေမှာပါ။ အိမ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီး မျက်နှာကြက်ကိုကြည့်၊ ငေးမော တွေးတောတတ်သူတွေအနေနဲ့ မျက်နှာကြက်လေးကို အလှဆင်ထားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
မျက်နှာကြက်မှာ ပန်းချီလေးတွေ ဆွဲထားတာမျိုး လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အကြိုက်က ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ vinyl ကပ်ထားပေါ့။ ဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုးမဆို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သာ ကပ်ထားလိုက်ပါ။
မျက်နှာကြက်မှာ အလင်းဖောက်နိုင်တဲ့ သွပ်တွေကို တပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလင်းရောင်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်ဖို့ကိုတော့ မေ့နေကြတယ်လေ။ ဖွင့်လို့ ပိတ်လို့ရတဲ့ မီးသီးလေးတွေ တပ်ထားပေါ့။ ညဘက်ဆို မျက်နှာကြက်က မီးရောင်စုံလေးတွေက စိတ်ကိုအေးစေပါတယ်။
နံရံတွေကိုသာ အလှစက္ကူတွေ ကပ်လို့ရတယ်လို့ ထင်နေမိတယ်မဟုတ်လား။ မျက်နှာကြက်မှာလည်း ကပ်လို့ရပါသေးတယ်။ နံရံတွေနဲ့ မျက်နှာကြက်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံအပေါ် အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
မျက်နှာကြက်ဆို အဖြူရောင်ပဲ တွဲမြင်ကြတယ်။ မျက်နှာကြက်ဖြူဖြူတွေကိုချည်း မြင်နေရတာ ပျင်းစရာတော့ကောင်းသား။ ဒီလိုဆိုရင် တခြားအရောင်တွေကို သုတ်ထားကြည့်မလား? တစ်ရောင်မကလို့ ရောင်စုံဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဒီဇိုင်းစုံအောင် သုတ်ထားလို့ရပါသေးတယ်။
ဖန်ထည်တွေ မှန်လေးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်မှာ ရှိနေမယ်ဆို ဘေးကအရာတွေကို ပိုမြင်ရတာပေါ့။ အလင်းရောင်လည်း ပိုထွက်စေလို့ အခန်းကို ပိုကျယ်သယောင် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဖန်ချောင်းလေးတွေ၊ မှန်ချပ်လေးတွေနဲ့ မျက်နှာကြက်ကို အလှဆင်မယ်ဆို အရင်ဆုံးစမ်းသပ်ပြီးမှ တပ်ထားသင့်ပါတယ်။